Hipoka ny lapa : tsy mbola lefy ny Mahaleo, lasa avo telo heny ny tapakila! | NewsMada
Hipoka ny lapa : tsy mbola lefy ny Mahaleo, lasa avo telo heny ny tapakila!
Nifanitsakitro! Samy niezaka naka ny anjara fahafinaretany avokoa ireo mpijery nameno ny lapan’ny Fanatanjahantena. Tsy mbola lefin’ny taona maro nolalovany ny tarika Mahaleo.
“Ravorondreo“. Tamin’ny 7 ora katroka, naneno ny feon-gitara voalohany ary io hira marodona hain’ny maro io avy hatrany no nanombohan’ny tarika Mahaleo ny fampisehoana. Zara raha nisy ampahefatry ny efitranon’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina anefa no feno tamin’io fotoana io. Naheno izany vao nikoropaka nibosesika ireo mbola variana “nirevy“, sy ireo tara noho ny fitohanana izay nampiteny irery tamin’io zoma io. Ny sasany kosa, mbola mifampitady tamin’ny tapakila, izay nisy nivarotra avo telo heny! Sady tsy misy henatra no manao varotra an’avona ireo nampiasa vola vetivety, nanangona tapakila maromaro mialoha ka nivarotra izany 15.000 Ar.
Efa vonona tsara ny hiatrika ny mpijery sy handalo ny ora maro an-kira izy enina mirahalahy teny an-tsehatra. Ny vazivazin’i Fafah, ny fanentanan’i Dama, ny tsikitsikin’i Dadah, samy nandravaka ny seho avokoa. Nisesy ny hira, ka izay naroso, niarahan’ny tarika sy ny mpijery avokoa. Izay nangatahan’ny mpijery famerenana, neken-dry Dama avokoa, satria ny mpijery no “hampirevena“, hoy izy ireo.
Raha fampisehoana hafa, tapitra tamin’ny 9 ora sy sasany. Ny tapany voalohany kosa no nifarana teo ho an’ny tarika Mahaleo. Efa samy nafana ny rehetra nandritra ny tapany faharoa, ka na ireo mpijery tety amin’ny tany aza, tsy nisy nipetraka intsony. Efa voky traikefa amin’ny fanafanana ny mpijery Mahaleo ny nandahatra ireo hira, ka tsy nisy nandalodalo fotsiny izany, na ireo tsy dia fanaon’ny tarika an-tsehatra firy aza.
Nisasaka ny alina, mbola tsy nifarana ny fampisehoana. Tsy hita soritra teny amin’ny tarehin’ireo mpanakanto akory ny harerahana, na efa nahazoazo taona avokoa azy izy ireo. “Fanomanana sahady ny fanamarihana ny faha-45 taon’ny tarika amin’io taona ho avy io ny anio“, hoy i Dama. Mandra-pahatonga izany, rahoviana ny manaraka?